Baaxadda shaqada ee ADN. | Djibouti Nature
Baaxadda shaqada ee ADN.
Ururka Xidhiidhka Jabuuti (Nature of Nature) (ADN) wuxuu ka shaqeeyaa arrimaha soo socda si loo gaaro ujeeddooyinkiisa istaraatiijiyadeed:
Horumarinta Karti-gelinta si kor loogu qaado Jaaliyada Jabuuti ee awoodda iyo ilaha awoodaha; in la hormariyo qaab-dhismeedkiisa; iyo in la gaaro heerka sare ee hufnaan dhaqaale.
Waxbarashada Deegaanka & Wacyigelinta wacyi-gelinta si kor loogu qaado tirada carruurta, dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee fahamsan hanjabaadaha duur-joogta ee Jabuuti waxaana lagu dhiirigalinayaa inay tallaabo ka qaadaan.
Noocyada Migratory si loo yareeyo hanjabaadaha si ay u haajiraan noocyada shimbiraha ee Jabuuti iyagoo ka qaybgalaya mashaariicda caalamiga ah iyo qabashada cilmi baarista.
Noocyada Khatarta ah ee Dhibaatooyinka ah si loo yareeyo halista loogu jiro noocyada halista ah ee Jabuuti iyada oo loo marayo cilmi baaris, hirgelinta hirgelinta iyo kor u qaadida wacyiga.
Noocyo isdabajoog ah si loo yareeyo hanjabaadda noocyada hooyo, iyada oo loo marayo ficil cilmi baaris iyo ilaalin.
Ilaalinta goobaha, oo ay ku jiraan Forests si kor loogu qaado ilaalinta goobaha muhiimka ah ee dabiicadda ee Jabuuti.
Dalxiiska si loo hagaajiyo ilaalinta xayawaanka iyo goobaha halista ah ee Jabuuti by dhiirigelinta jawiga-dalxiiska.
Marin si loo ilaaliyo loona hormariyo bey’adda badda ee Jabuuti iyadoo loo marayo cilmi baaris iyo u doodid.
Maaddooyinka halista ah si loo yareeyo khatarta ka iman karta xeebaha iyo xayawaannada dabiiciga ah ee ka yimaada sumoobid ula kac ah. Ujeedadaas waxaa lagu gaari doonaa meelo kale oo ka mid ah shaqada ADN.
Isbeddelka Cimilada si loo tixgeliyo saameynta ay ku yeelan karto isbeddelka cimilada ee goobaha iyo noocyada muhiimka ah iyo qorshee sida ugu fiican ee loo dhimi karo iyo / ama la qabsashada saameynta.
Ururka Jabbalku wuxuu mudnaanta siin doonaa arrimaha iyo ujeedooyinka istaraatiijiga ah ee ficillada sida lagu hago kheyraadka iyo caqabadaha waqtiga.